50jir Ganacsade ah oo cabsi darteed isu del delay | Camuud News Media Network
Home » CAMUUDMEDIA LIVE NEWS » 50jir Ganacsade ah oo cabsi darteed isu del delay
50jir Ganacsade ah oo cabsi darteed isu del delay
50 jir ganacsade ah ee tuulo ku taal degamada Tetu ayaa maalinimadii shalay is del delay, xilli uu diley xaaskiisa kadib markii ay wada murmeen.
Maina Maranga ayaa la sheegay in uu weeraray xaaskiisa oo la oran jirey Susan Wanjiku isaga oo qoorta kaga dhiftay seef baangad ah hase yeeshee goobta deg deg uga cararay isaga oo moodey in ay haweentu dhimatay, balse ninkani ayaa baxsashada kadib qaatay xarig isaga oo ku xiray geed isla markaasina uu iska soo lalmiyey.
Dadkii degaanka ayaa iyagu haweentii ula cararay isbitaal.
Mr. Maranga ayaa waxa uu Nyeri ku lahaa gaari bas nooca BL-ka ka shaqeeya degaanka. Taliyaha booliska Job Lesinikwa ayaa sheegay in ninkani is deldelay ee Maranga uu is ceejiyey cabsi uu ka qabo in dadka xaafaddu ay dilaan iyaga oo ku eedeeynaya in uu xaaskiisa diley.
Qof deriska ah ayaa sheegay in lammaanuhu ay u murmi jireen si joogto ah. Haweeneyda Wanjiku waxaa la dhigay isbitaalka Nyeri Outspan Hospital iyada oo ku jirta xaalad aad u cakiran.
Meydka Maranga ayaa isna waxaa loo qaaday qeybta heynta xogta ee isbitaalka Nyeri Referral Hospital.
Waayahan ayaa waxaa soo badanayey kiisaska ku saabsan lammaanaha isweeraraya iyadoo la soo weriyey boqolaal xaasas ah oo dhaawacyo soo kala gaareen tani oo ah tii ugu xumeyd ee murannada noocan ah ka dhalata.